Hanala sorisory fotsiny fa tsy hitolona
2011-11-22 @ 22:50 in Ankapobeny
Herinandro aho izay no nanoratra raha misy loza manambana ny tanàna noho ireo fifandonana sy korontana isan-karazany somary misesisesy ihany. Dia nitohy indray izany ny 22 novambra 2011. Tsy ilay heverina ho nomanin'ny sasany, araka ny fijeriko azy, fa fihetsika tsy nampoizina avy amin'ny fihetsika tsy nety fa fikasihana nataona Shinoa aminà Malagasy. Niteraka korontana teto afovoan-tanànan'Antananarivo moa izy io. Toa karazana kisendrasedra ihany hoe andro vitsy mialoha ny hahatongavan'ny Deba no nisy izany tranga izany (Eo amin'ny politika tsy misy kisendrasendra!)
Rehefa dinihina indray, ankoatra ny kajikajy efa niomanana mialoha tsy hitako tamin'ny fiandohan'ny zava-nitranga ny andro talata, dia zavatra mandalo ihany iny toe-javatra iny fa tsy ho lasa lavitra izany (Marina ny tenin'ilay Jeneraly malaza tamin'ity tetezamita ity). Tsy ho taitra velively ny olona rehefa tsy kasihana amin'ny zavatra ataony (na tsy ara-dalàna aza izany zavatra ataony izany). Antomotra koa moa ny fetin'ny faran'ny taona ka misy ny mitady hanararaotra haka fanomezana maimai-poana, hoy ny sasany. Raha ny toe-javatra sahala amin'ireny dia tsy hain'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao velively (Ankolafy Ravalomanana indrindra indrindra) ny hanararaotra hitarika olona na hisintona olona hanaraka azy handroba izany.
Sahiko ny milaza fa hatramin'izao, ny maro an'isa be dia be tamin'ireny olona nihetsika teny Behoririka ireny dia ny safidy politika tao aminy ihany no tazoniny ho azy, izany hoe mbola hanohana ny Fitondrana ankehitriny izy ireny raha raikitra ny fifidianana. Na dia sahirana dia sahirana aza ireo olona ireo dia ireo mitantana ankehitriny ihany no hotohanany satria tsy manana fahaiza-manao amin'ny serasera sy ny fampitan-javatra velively ny ankolafy mpanohitra. Manana mpamita hevitra amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny aterineto matanjaka dia matanjaka ry zareo ary hainy mihitsy ny mampiasa ny tsy fananan'ny olona na ny fahasahiranan'ny olona ho vokatry ny fanakorontanana sy fanelingelenana ataon'ny mpanohitra. Tsy mahavaly ireny karazam-pampitan-kevitra ireny mihtisy anefa ny avy amin'ny mpanohitra ka mahakely hatrany ny heriny ankoatra ny aty amin'ny aterineto irery ihany izay tsy mbola mahazo vahana amin'ny Malagasy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny.
Fehiny: fanalana sorisory (fanalana azy) ihany ireny nitranga ny talata 22 novambra 2011 ireny fa tsy anatin'ny tolona velively. Fahaizan'ny mpanararaotra ny ambiny ary rahampitso alarobia no hahitantsika izany. Azoko atao tsara ny miteny hoe enga anie ho diso hevitra ihany aho saingy kely finoana ny amin'izany mety ho fahadisoan-kevitro :D
Jentilisa 23 Novambra 2011 amin'ny iray maraina eto Madagasikara